Nhau DzeBonde | Nhau Dzevakuru - Part 4
Nhau DzeBonde3 years ago
Nyoro neMusoja WeMazizamu paKadoma – Part 1
Nyoro neMusoja Wemazizamu paKadoma – Part 1. Kamukadzi kaMusoja kaive nebeche rinonaka nemazizamu mahombe. Ndakaziva kuti ndapinda machena paakasekerera achimisa mota yangu paSuri Suri turn off...
Bamunini vakandizvambura nyoro kupfuura zvandinoitwa nemurume wangu!
Kunakirwa neMboro yaBamunini brother yemurume wangu.Ndinonzi Mai Belinda ndogara muHarare nemurume wangu and his young brother arikuenda kuUZ uko. Ndakasvika kumba mumwe musi ndachibva kumashops and...
Yainge iri weekend ndichangobva hangu kubasa apa ndainge ndakarohwa nenzara yebeche. Babe rangu rainge rayenda Joburg kwaigara sister yake for almost two weeks, taipota tichifonerana husiku...
Ndakanzwa mbutu ichiita kugwinha gwinha ndichibva ndatundawo ipapo!
Nerimwe zuva ndakagara hangu pamba iri Thursday apa ndapihwa off day kubasa, munogoziva kuti Thursday iLadies night. Ndakapfeka black jean rangu neshirt yaiyita kubata muviri zvekuti...
Kubhadhara Rent neMbutu Part 2 – Landlord vakakumbira kubata zvinhu!
Kubhadhara Rent neMbutu Part 2 – Landlord vakakumbira kubata zvinhu!. Takanga taita agreement yedu and i was happy kuti ndakugara mahara ndifunge kuoma kweHarare these days....
Celebrating Man United win nenyoro – Confessions of a Single Mother. I have never been this over excited in my life but I feel it was...
Nhasi ndirikunzwa kuda kuiswa nyoro, kusvikira ndatundirwa mukati!
Ndaishaya hope ndichingoshiringika, I’m not depressed or frustrated but muviri wangu urikunzwa kungoda kuiswa.Let me get straight to the point, ndiri lonely and ndirikuda kusvirwa serious. Ndirikuda...
Ndakaiswa nayo ndikanzwa makumbo akudedera nekunakirwa!
I have a confession, ndainge ndine Ex yangu and ainge ari munhu aribho apa aisvira zvokuti but for some reason ndakaita cheat on him. Shamwari yeEx...
Kubhadhara Rent neMbutu – LANDLORD akanakirwa aona Tan Tan Pazvidya
Kubhadhara Rent neMbutu – LANDLORD akanakirwa aona Tan Tan Pazvidya zvangu. I don’t want to blow my own horn but, ndirichibaby chidanger chemuHarare but not originally,...
Ndainzwa pressure build up mukati apa matinji achinyerekedza!
Ndakanzwa mota ichiridza hotter, yainge iri Uber yainge yasvika apa ndainge ndisati ndapedza. Ndakazvitarisa pa mirror last time ndisati ndabuda. Ndakanhonga purse yangu, keys, phone ndokubuda...
Ndakaita kupomba chinhu kusvikira ndakunzwa kuda kutunda!
Pandainge ndine 18 years ndakapedzisira ndakugara nesister yangu yainge ine 25 years, apa vaive nemwana one musikana. Pataikura ndaigara ndakapfeka pant kana maboxer everytime ndichifamba mumba...
Akandiisa kunge hure ndokutanga kuyamwa chombo changu ndikatunda!
Ndainge ndava nemwedzi ndisina kuwona beche and ndainge ndakuita desparate nekuda chero beche randinenge ndawona kana kubhawa ndaigona kuyenda kunotora hure other than kusvira Mavy nasisi...
Akasimudza gumbo mudenga apa chinhu chake chakazvimbirira nenyere!
Ndainge ndachiyenda hangu kumusha apa musi uyu kwainayirira mvura iya inenge ichingoita tuma showers asi usingatote ichiita ichimbomira yoita kunge yawedzera. Ndirimubhazi imomo pamberi pangu painge...
Akachemerera achibva aridza mhere apa ichinyura mukati make!
Ndine 35 years and ndinogara ndega full house, ndine transport business yangu saka ndinoshanda ma long hours and only get to relax on Sunday. Zuva iri...
Ndakamupidigura and grabbed magaro ake ndokupomba kusvikira ndatundira mukati!
Last year mukadzi weshamwari yangu akarambana nemurume wake and aida somewhere pekuti agare since murume wake ainge akusabhadhara rent. Mukadzi aida zvokuti ndiwirirane neshamwari yake but...
Ndirikunzwa kuda murume anondiisa zviri hard asingakurumidze kutunda!
Ndaida kuti anditundire pamuviri wangu wese kuti ndiite hurume hwekutora ndichinanzva.Ndadzoka kumba apa ndainge ndichibva kuwork enjoying hangu holiday but zemo ndiro rainge rakandirova, ndirikunzwa kuda...
Ndakaramba ndichiwedzera kumuisa nerurimi apa ndichirumirira!
Kate ainge anaka nekushanda kwaaiyita to add to her pleasures, ndaitambisa rurimi rwangu mukati mebeche rake ndikanzwa achiita kuridza kamhere apa ndichinanzva juice dzese dzaibuda mubeche rake.It...
Ndakanzwa ropa kumhanya muviri wese apa kuzasi kuchinyerekedza!
Ndainge ndakarara hangu kubeach ndichirohwa nezuva apa ndainge ndazora baby oil ndichiita kupenya ndichiterera hangu mvura ichiyerera mu Ocean. Ndainge ndakavhara hangu maziso ndokubva ndanzwa voice...
Ndakaridza kamhere apa kuzasi kuchitsemukira nhengo yavo ichinyura zvisina tsitsi
Pandaikura ndaingovafarira semurume watete. Mari ndaipiwa kudarika vamwe vese ko murume weduka. I kept myself ndiri kavirgin not for him but my mother advised us of...
Ndakaita kuishwetedza ndikanzwa mwana achiita kuzuzuma nekunakirwa!
Nerimwe zuva ndayenda zvangu ku Gym apo ndainge ndatanga kuita ma dance lessons kuti ndigare ndiri fit. Mwana ainge akanaka iyeye and aigona kutamba kunge ndiye...